तिथि मेरो पत्रु » 12 अनलाइन डेटिङ लागि स्मार्ट सर्छ
द्वारा स्टीव णकमोतो
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 26 2020 |5मिनेट पढ्न
ब्रडबैण्ड को विस्फोटक वृद्धि स्पष्ट अनलाइन डेटिङ रहन यहाँ छ कि बनाउने छ. आजको व्यस्त जीवनशैलीको संग, धेरै एकल अनलाइन डेटिङ दुवै सजिलो छ कि पाइरहेका छन्, सस्ता, र कम समय परम्परागत डेटिङ तरिका भन्दा खपत.
डेटिङ को यस नयाँ तरिका परिचय रूपमा, यहाँ आफ्नो अनुभव सन्तोषजनक र कम पीडादायी बनाउन बनाउन केही स्मार्ट चाल हो:
1. एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण ले: अनलाइन डेटिङ परिचय को एक विभिन्न प्रकार भन्दा बढी केही छ बुझ्नुहोस्. सीमित समयका लागि यो एक चलाएर र यो आफ्नो समग्र सामाजिक योजना परिपूरण बनाउन. अनलाइन डेटिङ विपरीत सेक्स गर्न आफ्नो मात्र जडान नगर्नुहोस्, अन्यथा तिमी जा एक्लो वा लागिपरेको रूपमा भर आउन छौँ. योग्य प्रेम उम्मेदवार बैठक एकदम हद सम्म एक संख्या खेल छ, जबकि (औसतें को व्यवस्था), यो मामिलामा कि बाहिर काम छैन कति मान्छे होइन भन्ने महसुस. के कुरा गर्नुहुन्छ जो गर्दछ एक हुनुहुन्छ भनेर छ.
2. एक्लै त्यसो नगर: एक मित्र मुछिएको र सँगै यस अनलाइन डेटिङ साहसिक गरेर यो धेरै रमाइलो र रोचक गतिविधि बनाउन. तपाईं नै समय सँगै नोट तुलना र प्रक्रिया मार्फत गएर अधिक चाँडै सिक्न सक्छौं. यो पनि तपाईं को बन्द दबाब हुनेछ, तपाईं मानिसहरूलाई कम लागिपरेको जस्तो बनाउन, र सँगी loners लागि देख त्यहाँ बाहिर गुप्त हुन सक्छ जसले weirdo गरेको विरुद्ध सुरक्षा रूपमा सेवा.
3. ताजा शुरू र ताजा रहनलाई: यस नयाँ साहसिक मा कुनै पनि भावनात्मक सामान बोक्न नगर्नुहोस्. त्यो तपाईं गुनासो गर्न कुनै पनि झुकाव हटाउन गर्नुपर्छ अर्थ, निन्दा, आलोचना, वा डेटिङ बारेमा नकारात्मक हुन, रोमान्स, प्रेम, वा विपरीत सेक्स. तपाईंको मनोवृत्ति एक नयाँ प्रेम आशा संग एक महान पहिलो छाप पार्न अदृश्य तरिका हुन्छ. अनलाइन डेटिङ, तपाईं वास्तवमा देखेर या उनलाई पहिले बैठक बिना अन्य व्यक्ति चिन्न अद्वितीय अवसर छ. तपाईं एक अनुहार-गर्न-अनुहार बैठक मा गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मुस्कान चाहन्छु जसरी आफ्नो मनोवृत्ति चमक बनाउन.
4. एक असल दिंदा डेटिङ साइट चयन: अधिक सफल तलब साइटहरु प्रयोग. किशोर-किशोरी भेट्न छन् जो मुक्त व्यक्तिगत विज्ञापन जोगिने, विवाहित मान्छे, र stalkers. कार्यक्रम को लागत मुफ्तखोर बाहिर जांच को लागि लायक छ. तपाईं पनि तपाईं एक विशेष चासो आधारित आला बजार पा आफ्नो प्रयत्नमा परिपूरण गर्न सक्छन् (DateMyPet.com घरपालुवा जनावरको लागि) वा तपाईं अधिकार एक अद्वितीय गुणस्तर (जातीय पृष्ठभूमि, ठूलो आकारको).
5. एउटा ठूलो संग फोटो प्रभावकारी विज्ञापन कपी लेख्नुहोस: कि छोटो छ एक प्रतिभाशाली मित्र तपाईं को एक राम्रो वर्णन लेख्न, गुलियो, र आकर्षक. धेरै विवरण वा व्यक्तिगत जानकारी दिन नगर्नुहोस्. रहस्य को एक तत्व कायमै, पनि. तपाईं एक चापलूसी फोटो छ कि छैन, पक्का, हाल छ, तपाईं एक्लै, र आफ्नो अनुहार मा एक स्वभाव मुस्कान संग. धेरै नमूना फोटो लिनुहोस् र सबै भन्दा राम्रो एक चयन. आवश्यक भने, धेरै फोटो समावेश वा समय समयमा तिनीहरूलाई परिवर्तन. चित्र को शक्ति कम मत बुझन. यस्तो लेखिएको छ कि चिनियाँ उखान सम्झना: एक तस्वीर लायक एक हजार शब्द छ.
6. एउटा सुरक्षित इन्टरनेट डेटिङ नमुना पछ्याउनुपर्छ: आफूलाई सिमित3प्रति व्यक्ति correspondences. लगभग एक घण्टा लागि दिउसो मा कफी लागि एक सार्वजनिक ठाउँमा भेट्ने. केहि पछि निर्धारित गरेको छ (एक मित्र मिलन) ताकि तपाईं वरिपरि पनि लामो रहन मा कुरा गर्न सकिँदैन. तपाईं असहज महसुस भने, एक मित्र संग ल्याउन र उनीहरूले दुई मान्छे सट्टा एक पूरा गर्न एक बोनस मौका छ कि पूरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ व्यक्ति बताउन. तपाईं यस परिचय माध्यम प्राप्त भने, त्यसपछि तपाईं एक सामान्य डेटिङ नमुना संग अगाडी बढन सक्छ, पछि इन्टरनेट भाग छोडने र बिर्सेका.
7. तपाईं चाहँदैनन् के स्पष्ट लिन: हार्नेहरू वा संभावित खतरनाक मान्छे बाहिर झार. माथि मा नकारात्मक मा आफ्नो अंतर्ज्ञान र आफ्नो बुद्धि भरोसा. व्यक्ति कुनै पनि तरिका अनौठो देखिन्छ भने, कि मौका मा पारित गर्न पक्का हुन. तपाईं यस विशेष व्यक्ति गलत हुन सक्छ, तर तपाईं लामो समय मा सुरक्षित हुन छौँ. अनौठो व्यवहार केही सुराग समावेश: धेरै इमेल पनि अक्सर, यौन स्पष्ट भाषा, नियन्त्रण टिप्पणी, अत्यधिक रिस, मायावी रणनीति, विरोधाभासपूर्ण जस्तो देखिने लुकेको रहस्य वा कुराहरू र धेरै.
8. तपाईं चाहनुहुन्छ के थाह: तपाईं हृदय को मामला मा एक दीर्घकालीन प्रेम साथी कस्तो स्पष्ट विचार छ, चरित्र, व्यक्तित्व, र अनुकूलता. सम्बन्ध लक्ष्य मिलान संग कुनै लागि हेर, सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व, यस्तै कोर मान, र एक जीवन शैली फिट. खराब व्यक्तिहरूको पान गर्न सुरुमा होसियार हुनुहोस्, तर प्रेम सम्बन्ध मा तपाईं चाहनुहुन्छ असल कुराहरू खोज्न तुरुन्तै. त्यो सकारात्मक तपाईं राख्न र अरूलाई तपाईं आकर्षक बनाउन हुनेछ.
9. प्रारम्भिक तिनीहरूलाई पर SPOOK नगर: धेरै प्रश्न सोधेर तिनीहरूलाई टाढा डरा प्रेम साथी जोगिन्छौं उत्कृष्ट क्षमता संग कुनै पाउन भने, प्रश्न को गलत प्रकारको सोधेर, गुणहरू misrepresenting, पनि खाँचोमा परेका प्रदर्शित, कुनै अन्य सामाजिक आउटलेट भएको, मित्र, या संभावित केटा. आफ्नो तागत खुल्लमखुल्ला कुरा, तर बास वा आफ्नो कमजोरी ध्यान केन्द्रित गर्न कुनै आवश्यकता छैन. यो स्वाभाविक अन्तरक्रिया मार्फत थाहा भएको छ रूपमा एक सामान्य गतिमा जानकारी प्रवाह गरौं. सोधेर वा पनि चाँडै धेरै जानकारी प्रकट को पासोमा नगर्नुहोस्.
10. गलत नगर, आफैलाई: एक कम्प्युटर टर्मिनल पछाडि व्यक्ति सुन्दर हुन सक्छ, अविवाहित, सफल, धनी, र सबै सँगै अद्भुत, तर उनको वास्तविकता धेरै फरक हुन सक्छ. आफूलाई पुराना फोटोहरू प्रयोग गर्ने अरूलाई जस्तै हुन र आफूलाई बारेमा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रोफाइल न लेखन. आफैलाई इमानदार हुनुहोस् र त्यसपछि पनि इमानदार हुन कौशलतापूर्वक तरिकामा आफ्नो संभावित सोध्न. कुनै पनि इमानदार छैन भने, या त कुनै पनि भरोसा हुन सक्दैन. त्यो दीर्घकालीन प्रेम सम्बन्ध को कुनै पनि प्रकारको सुरु गर्न कुनै तरिका हो.
11. Recharge र reevaluate गर्न एक तोडने: तपाईं होसियार छैन भने अनलाइन डेटिङ तपाईं तल पहन गर्न सक्छन्. यो पनि तपाईं कम मानव र डेटिङ र विपरीत सेक्स बारेमा थप सनकी बनाउन सक्छ. म तपाईं मात्र एक लागि साइन अप सुझाव किन त्यो हो3सुरुमा एक अनलाइन डेटिङ सेवा गर्न महिना सदस्यता. पछि3महिना भन्दा बढी छ, एक तोडने र आफ्नो सफलता र असफलता reevaluate. शायद तपाईं आफ्नो विज्ञापन प्रतिलिपि वा आफ्नो फोटो परिवर्तन गर्न आवश्यक. एक बुद्धिमानी मछुवा जस्तै, तपाईं आकर्षित जस्तो देखिन्छ प्राणीहरू कस्तो प्रकारको शायद तपाईं किनकी आफ्नो चारा परिवर्तन गर्न आवश्यक. शायद यो तपाईं व्यक्ति को एक भिन्न प्रकारको आकर्षित भने हेर्न क्रम मा अर्को साइट प्रयास गर्न समय छ. तर सबै को सबै भन्दा, एक तोडने लिएर अनलाइन डेटिङ मा आफ्नो अर्को प्रविष्टि आशावादी र सकारात्मक हुनेछ भनेर तपाईं आफ्नो दृष्टिकोण पुनः प्राप्त मदत गर्नेछ.
12. मजा छ या यो सबै गर्दैनौं: यस गतिविधि मजा वा सबै भाग छैन. जस्तै नै यो एक परेशानी हुन्छ रूपमा, आफ्नो आत्म-सम्मान सर्वनाश, वा निराशा मा एक व्यायाम जस्तै महसुस, यो गरेर रोक्न र आफ्नो जीवन मा केहि ध्यान केन्द्रित. इन्टरनेट डेटिङ धेरै मान्छे को लागि सफल हुन सक्छ तर यो स्मार्ट चाल बनाउन निर्भर, एक ठूलो मनोवृत्ति कायम, अटल धैर्य भएको, भाग्य अन्ततः आफ्नो बाटो आउँदा र भावनात्मक तैयार.
अनलाइन डेटिङ परिचय बनाउन नयाँ तरिका भन्दा बढी केही छ. मात्र स्मार्ट चाल बनाउन र प्रेम बाटोमा आफैलाई पालन गर्न मूक व्यक्तिहरूलाई जोगिन. अर्को व्यक्ति तपाईं को लागि एक छ भने तपाईं थाह कहिल्यै. अनि प्रेम को खेल मा, यो मात्र जीवन को लागि एक विजेता बन्न एक लिन्छ. शुभकामना र आफ्नो यात्रा को आनंद!